Top 3 Máy làm trân châu loại nào tốt dễ sử dụng nên mua nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 3 Máy làm trân châu loại nào tốt dễ sử dụng nên mua nhất | Muasalebang in Muasalebang
Itiye lobisi yisiphuzo esithandwayo nesimnandi esithandwa yintsha eningi. Kuhlanganiswe nama-toppings afana namaparele, itiye lobisi liyindilinga nakakhulu futhi liyathandeka. Esikhundleni sokwenza amaparele ngesandla, manje umshini wokwenza amaparele wazalwa ukukusiza ukuthi udale amaparele amahle, ayindilinga futhi wonge isikhathi sokukhonza izidingo eziphakeme zezitolo zetiye zobisi. Ake sithole oku-3 okuphezulu umshini wokwenza pearl Iluphi uhlobo oluhle futhi olusebenziseka kalula okufanele luthenge kakhulu esihlokweni esingezansi!
1 Ingabe kufanele ngithenge umshini wokwenza amaparele ngokushesha?
2 Imibandela yokukhetha umshini wokwenza iparele ongcono kakhulu
2.1 Ngokusekelwe kumbandela wohlobo lomshini
2.2 Ngokusekelwe kumibandela yentengo yokuthengisa
2.3 Ikheli lokuthenga idivayisi
3 Imishini engu-3 ehamba phambili yokwenza amaparele namuhla kulula ukuyisebenzisa
3.1 1. Philips pearl umshini
3.2 2. Umshini wokwenza iparele we-Dasin
3.3 3. Umshini wokwenza amaparele iSaki
Ingabe kufanele ngithenge umshini wokwenza amaparele ngokushesha?
Umshini wokwenza i-Pearl isiza izitolo zetiye zobisi ukuthi zenze amaparele amnandi ahlukile kulawo athengwa emakethe ngokuhlanganisa izithako eziningi ezahlukene. Esikhundleni sokuchitha isikhathi esiningi nomzamo ekucubunguleni izinyawo zenyathi, ungasebenzisa umshini ukwenza inani elikhulu lamaparele ukuze uhlangabezane nezidingo zamakhasimende.
Umkhiqizo womshini wokwenza iparele unezinzuzo eziningi ezivelele njengomklamo womshini olula nowesayensi owenza kube lula kubasebenzisi ukuthi basebenze. Usayizi ohlangene awuthathi isikhala esiningi kwikhawunta futhi isisindo esilula senza kube lula ukuhamba.
Umshini wenziwe ngensimbi engagqwali ukuqinisekisa ukuphepha okuphelele nokuhlanzeka ohlelweni lokukhiqiza kanye nempilo yabathengi. Lo mshini unezingxenye ezincane ezingu-3 okuhlanganisa isikhunta esicindezelayo, i-fiber cutter, nesisiki sokusanhlamvu ukuze usize amaparele enziwe axutshwe nofulawa werayisi owomile ukuze anganamatheli futhi aqine anosayizi oyindilinga.
Imibandela yokukhetha umshini wokwenza iparele ongcono kakhulu
Kunemikhiqizo eminingi emakethe namuhla umshini wokwenza pearl. Ngakho-ke, kuye ngezidingo nezinjongo zokusetshenziswa, ungazikhethela imikhiqizo yomshini ofaneleka kakhulu
Ngokusekelwe kumbandela wohlobo lomshini
Emakethe namuhla, kunezinhlobo ezi-3 ezidumile zemishini yokwenza amaparele: umshini wokwenza iparele ozishintshayo, umshini wokwenza iparele ozenzakalelayo kanye nomshini wokwenza amaparele. Uhlobo ngalunye luzoba nezici ezihlukile nezintengo ezihlukile:
Umshini wokwenza iparele ozishintshayo uqukethe izingxenye ezimbili eziyinhloko, iyunithi eyinhloko kanye nesitsha sokuxuba. Kanye nezingxenye ezintathu ezincane, isikhunta sokunyathelisa senza umsebenzi wokucindezela amaqebelengwane e-tapioca, futhi umsiki wentambo wenza umsebenzi wokusika inhlama ecindezelwe ibe yizicucu ezingu-10 cm ubude nobubanzi obujwayelekile bamaparele. Umsiki wobuhlalu unomsebenzi wokusika imicu yeparele ibe yizinhlayiya ezincane. Ngemuva kokunqunywa kwamaparele amancane, kuzofakwa esitsheni sokuxuba ukuze kuhlanganiswe kahle nofulawa welayisi ukuze ufulawa unganamatheli futhi uqine kakhulu. Ububi obukhulu balo mshini ukuthi ngenhlama kusafanele uyixove ngesandla.
Umkhiqizo umshini wokwenza pearl Ukwakheka kweyunithi okuzenzakalelayo konga isikhathi esinzima. Umshini unomthamo omkhulu kakhulu ongaxova ama-30kg ngehora. Kodwa-ke, ukulinganiselwa komshini wokwenza iparele othomathikhi ukuthi umshini ongenawo ibhodwe lokuxuba amaparele aphelile awuqinile futhi uyindilinga njengomshini we-semi-automatic. Izindleko zomshini wokwenza iparele othomathikhi ziphakeme kakhulu kunezomshini we-semi-automatic.
Umshini wokwenza iparele owenziwe ngesandla uyinhlanganisela yokusika unyawo lwenyathi kanye ne-extruder yentambo. Udinga nje ukufaka ucezu olukhulu lukafulawa we-tapioca ku-extruder futhi uzothola imicu yenhlama ende. Khona-ke le micu yenhlama izonqunywa ibe mfushane futhi izofakwa esikhunjini ukuze isike amaparele amancane.
Ngokusekelwe kumibandela yentengo yokuthengisa
Ngokuya ngomsebenzi nokusetshenziswa kwemikhiqizo yomshini wokwenza iparele, kuzoba namanani ahlukene. Umshini wokwenza pearl owenziwe ngesandla uzoba nenani elishibhe kakhulu, bese kuba umshini wokwenza iparele ozishintshayo futhi ophakeme kakhulu umshini wokwenza iparele ozenzakalelayo. Intengo yokuthengisa yemikhiqizo yomshini wokwenza iparele isuka ku-VND 4,500,000 iye ku-VND eyizigidi eziyi-10.
Ikheli lokuthenga idivayisi
Ngemikhiqizo efana nemishini yokwenza amaparele, kufanele uye ezindaweni ezinedumela elihle ukuze uthenge imishini. Ikheli elithembekile lokuthenga umshini lizoqinisekisa ukuthi kunezici ezihlobene nekhwalithi namandla wonke ahlangabezana namazinga emigqa yomkhiqizo wekhwalithi. Ngokungeziwe kumakheli okuthenga angempela, ungathenga ku-inthanethi kuwebhusayithi esemthethweni noma ezinkundleni zokuxhumana ze-e-commerce ukuze ukwazi ukuba nemikhiqizo yangempela.
Imikhiqizo Ethengiswayo 50% Umshini wokwenza itiye le-Bubble – Umkhiqizo wangempela, i-Long Teng Umshini we-pellet ongu-8mm ububanzi ulungele ukwenza amaparele namaphilisi okuphathwa ngomlomo, i-OEM Umshini wokwenza amaphilisi e-herbal, itiye lobisi lweparele, i-OEM 10 Litre Pearl Incubator, OEM 10mm ububanzi round pellet isikhunta, nxazonke, ngisho, ngokuvamile esetshenziswa njengamaparele, amaphilisi Chinese, OEM Umshini Wokwenza Iparele, Umshini Wokwenza Iparele Okuzenzakalelayo , 22Kg Umshini Wokugcwalisa Iphilisi Ozenzakalelayo WaseNyakatho – Umkhiqizo Wangempela…, Wecha Usayizi womshini wokwenza itiye le-Bubble 8mm, i-OEM
Imishini engu-3 ehamba phambili yokwenza amaparele namuhla kulula ukuyisebenzisa
Nazi eziphezulu ezi-3 umshini wokwenza pearl Imikhiqizo ehamba phambili ithandwa ngabathengi abaningi futhi inokuthengwa okuphezulu kakhulu kumapulatifomu e-e-commerce.
1. Philips pearl umshini
Umshini we-pearl we-Philips unenani elikhangayo elinezibunjwa eziningi ezincane ezihlukene kusikhunta esikhulu esifanayo esisetshenziselwa ukwenza amaparele angu-8mm. Ngaphezu kwalokho, umshini ubuye ube nesikhunta esi-4 sokwenza i-vermicelli, i-vermicelli, ama-noodle, nama-noodle ngofulawa olula kanye nethuluzi lokulinganisa amanzi namathuluzi okuhlanza. Umshini ufakwe indawo ekahle yama-noodle kanye nethuluzi lokulinganisa likafulawa elihlakaniphile namanzi.
Sebenzisa Umshini weparele wePhilips Futhi kulula kakhulu, abasebenzisi badinga nje ukulungisa izithako, bafake inhlama emshinini, bavule imodi yamandla, bese besebenzisa i-cutter ehambisana naso ukusika ubude bama-noodle njengoba befisa, bangacubungula futhi bajabulele izitsha ezimnandi. Ukuhlanza umshini nakho kulula kakhulu ngoba izingxenye ezifana nesivalo, isikhunta, ithangi lokuxuba, ukuxuba amalahle kungahlakazwa ngokushesha futhi kalula ngokuphendula ama-knobs angu-2 phambi komzimba. Bese uqhubeka nokugeza ngayinye yalezi zingxenye ngaphansi kwamanzi aqondile, bese usula bese ufaka.
2. Umshini wokwenza iparele we-Dasin
Umshini wokwenza i-tapioca omusha we-Dasin ungumshini wesimanje osemshinini wokwenza amaparele ongu-100%. Udinga nje ukufaka ufulawa bese ucindezela inkinobho futhi umshini uzosika ngokuzenzakalelayo inhlama ibe amaparele amasha ngesikhathi esisheshayo. Umzimba wenziwe ngensimbi engagqwali engu-100%, kulula ukuyihlanza nokuyinakekela. Idizayinelwe ngeminyango yengilazi esobala, nobabili ningenza umsebenzi wasendlini futhi nibheke inqubo yomshini yokwenza amaparele.
Idizayini Dasin pearl umshini wokwenza Compact and nenhle ukufanisa ukwakheka kwanoma iyiphi indawo ekhishini. Amandla omshini angakhiqiza ama-30kg amaparele aqediwe phakathi nehora elingu-1 amaparele ayindilinga ngisho namahle. Umshini unemodi yokuvikela ephephe kakhulu lapho umshini usebenza, uma uvula umnyango wekhabethe lengilazi, umshini uzonqamula ngokuzenzakalelayo ukugwema ukuthi izandla zakho zihlangane ne-blade.
Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo eqediwe, ukwenza amaparele amasha kuzoqinisekisa ukuphepha kokudla, konga izindleko nokulawula inani elifanele lamaparele adingekayo. Amaparele amnandi azoletha izinkomishi zetiye zobisi lweparele eziyindilinga eziheha futhi zigcine amakhasimende ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi nomzamo.
3. Umshini wokwenza amaparele iSaki
Umshini wokwenza amaparele we-Saki brand semi-automatic ungumkhiqizo wokusekela ukukusiza wenze amaparele asheshe futhi abe lula. Umzimba womshini uklanywe ngensimbi engagqwali efanele amabhizinisi agxilile namancane anomklamo ozenzakalelayo osebenzisa amandla omuntu ngezigaba ezithile. Lo mshini unezingxenye ezi-4 eziyinhloko ezihlanganisa okokugingqa inhlama, okokuxova inhlama, okokugingqa inhlama kanye nokokugalela.
Umshini wokwenza iparele weSaiki inobubanzi obuyindilinga, usayizi olinganayo ngokusebenzisa indalo eyodwa futhi ayidingi ukuhlolwa ukuze usize ukudala ama-pellets ncamashi ngokwepharamitha ethile. Ukusebenzisa umshini kulula kakhulu, udinga nje ukuxuba ingxube ukuze wenze amaparele ngesilinganiso esifanele bese ufaka le ngxube kudivayisi yokuxuba. Bese uyikhipha ocingweni uyifake emshinini wokugoqa ukuze uyivule. Qhubeka nokubeka inhlama egoqiwe engxenyeni yokusika bese uyifaka ku-granulator ukuze ube namaparele amahle futhi ayindilinga.
Umzimba wonke wedivayisi wenziwe ngensimbi engagqwali ukuze kube lula ukuhamba nokuhlanza, futhi idivayisi ingasuswa kalula futhi ifakwe. Amandla omshini afika ku-1800w enza ukudala amaparele kusheshe futhi kube lula. Ngenxa yalokho, unganikeza itiye elimnandi lobisi eliningi ukuze uhlangabezane nenani elikhulu lamakhasimende ngenkathi usaqinisekiswa ngekhwalithi yamaparele netiye lobisi elidaliwe.
Nazi eziphezulu ezi-3 umshini wokwenza pearl Iluphi uhlobo oluhle, olusebenziseka kalula, okufanele luthengwe yithi, yilona olungcono kakhulu esiluhlanganisayo. Ukuba nomshini wokwenza iparele kuzokusiza ukuthi udale amaparele ayindilinga namahle aphephile futhi ahlanzekile. Umkhiqizo ulungele ikakhulukazi izitolo zetiye zobisi ezinesidingo esikhulu sansuku zonke samaparele. Ungabe usalinda, thenga umkhiqizo namuhla.